ထူးခြားသော ငွေစာရင်းတစ်ခု – Gentleman Magazine
သင့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ငွေစာရင်းထဲကို မနက်ခင်းတိုင်းမှာ ငွေကျပ် ၈၆၄၀၀ ထည့်ပေးတဲ့ ဘဏ်တစ်ခုရှိတယ် ဆိုပါစို့။
ဒီဘဏ်မှာ စည်းကမ်းချက်တစ်ခုတော့ ရှိပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ ဘဏ်ကထည့်သွင်းပေးထားတဲ့ ငွေကျပ် ၈၆၄၀၀ ကို နေ့မကူးခင် အကုန်သုံးလို့ ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မသုံးနိုင်လို့ ကျန်နေတဲ့ငွေကိုတော့ နောက်တစ်နေ့စာရင်းထဲ ပြောင်းရွှေ့မပေးပဲ တစ်ရက်တာကုန်ဆုံးတာနဲ့ ဖျက်သိမ်းလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုသာဆိုရင် သင် ဘာလုပ်မလဲ ???
နေ့မကူးခင် အကုန်သုံးမလား။ ရိုးရိုးသားသား ဖြေဆိုပါ။
ကျွန်တော်တို့ အားလုံးမှာ ဒီလိုဘဏ်စာရင်းတစ်ခုစီ ရှိကြပါတယ်။ အဲ့ဒီဘဏ်စာရင်းကို “အချိန်” လို့ ခေါ်ပါတယ်။ မနက်မိုးလင်းတိုင်းမှာ ကျွန်တော်တို့အတွက် စက္ကန့်ပေါင်း ၈၆၄၀၀ ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ညရောက်တာနဲ့ သင်မသုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ စက္ကန့်တိုင်း၊ မိနစ်တိုင်းကို ပယ်ဖျက်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်နေ့မှာ ပြန်မရနိုင်ပါဘူး။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်းမှာ သင့်စာရင်းက အသစ်ဖြစ်နေပြီး တစ်ရက်တာကုန်ဆုံးတာနဲ့ မသုံးဖြစ်တဲ့အချိန်တွေကို ပယ်ဖျက်လိုက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သင် မသုံးဖြစ်လိုက်တဲ့ အချိန်တွေက သင့်ရဲ့ဆုံးရှုံးမှုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြန်လည်တောင်းဆိုလို့ မရနိုင်ပါဘူး။
ဒါ့အပြင် အချိန်ကို ချေးငှားလို့လည်း မရနိုင်ပါဘူး။ သင့်မှာရှိတဲ့အချိန်က သင့်အချိန်ပါပဲ။ ငွေကြေးသာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုသုံးစွဲမလဲဆာကို ဆုံးဖြတ်ရသလို ဒီအချိန်တွေကို သင်ဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲဆိုတာကလည်း ဆုံးဖြတ်ရမှာပါ။
သငျ့ရဲ့ ကိုယျပိုငျငှစောရငျးထဲကို မနကျခငျးတိုငျးမှာ ငှကေပျြ ၈၆၄၀၀ ထညျ့ပေးတဲ့ ဘဏျတဈခုရှိတယျ ဆိုပါစို့။
ဒီဘဏျမှာ စညျးကမျးခကျြတဈခုတော့ ရှိပါတယျ။ သငျ့အနနေဲ့ ဘဏျကထညျ့သှငျးပေးထားတဲ့ ငှကေပျြ ၈၆၄၀၀ ကို နမေ့ကူးခငျ အကုနျသုံးလို့ ရပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ မသုံးနိုငျလို့ ကနျြနတေဲ့ငှကေိုတော့ နောကျတဈနစေ့ာရငျးထဲ ပွောငျးရှမေ့ပေးပဲ တဈရကျတာကုနျဆုံးတာနဲ့ ဖကျြသိမျးလိုကျမှာဖွဈပါတယျ။
ဒီလိုသာဆိုရငျ သငျ ဘာလုပျမလဲ ???
နမေ့ကူးခငျ အကုနျသုံးမလား။ ရိုးရိုးသားသား ဖွဆေိုပါ။
ကြှနျတျောတို့ အားလုံးမှာ ဒီလိုဘဏျစာရငျးတဈခုစီ ရှိကွပါတယျ။ အဲ့ဒီဘဏျစာရငျးကို “အခြိနျ” လို့ ချေါပါတယျ။ မနကျမိုးလငျးတိုငျးမှာ ကြှနျတျောတို့အတှကျ စက်ကနျ့ပေါငျး ၈၆၄၀၀ ရရှိမှာဖွဈပါတယျ။ ညရောကျတာနဲ့ သငျမသုံးဖွဈခဲ့တဲ့ စက်ကနျ့တိုငျး၊ မိနဈတိုငျးကို ပယျဖကျြလိုကျမှာဖွဈပါတယျ။ နောကျနမှေ့ာ ပွနျမရနိုငျပါဘူး။ နစေ့ဉျနတေို့ငျးမှာ သငျ့စာရငျးက အသဈဖွဈနပွေီး တဈရကျတာကုနျဆုံးတာနဲ့ မသုံးဖွဈတဲ့အခြိနျတှကေို ပယျဖကျြလိုကျမှာ ဖွဈပါတယျ။ သငျ မသုံးဖွဈလိုကျတဲ့ အခြိနျတှကေ သငျ့ရဲ့ဆုံးရှုံးမှုပဲ ဖွဈပါတယျ။ ပွနျလညျတောငျးဆိုလို့ မရနိုငျပါဘူး။
ဒါ့အပွငျ အခြိနျကို ခြေးငှားလို့လညျး မရနိုငျပါဘူး။ သငျ့မှာရှိတဲ့အခြိနျက သငျ့အခြိနျပါပဲ။ ငှကွေေးသာဖွဈခဲ့မယျဆိုရငျ ဘယျလိုသုံးစှဲမလဲဆာကို ဆုံးဖွတျရသလို ဒီအခြိနျတှကေို သငျဘယျလိုအသုံးပွုမလဲဆိုတာကလညျး ဆုံးဖွတျရမှာပါ။
Previous: ချစ်တင်းနှောပြီးနောက် မလုပ်သင့်သည့် အရာများ
Next: အစာစားပြီးပြီးချင်း ရေသောက်သင့်လား